Qalalaasaha Tigray:- “Waxaa nalagu qasbay inaan kufsanno xubno qoyskeenna ka tirsan” | Gaaroodi News
Qalalaasaha Tigray:- “Waxaa nalagu qasbay inaan kufsanno xubno qoyskeenna ka tirsan”
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in lala xisaabtami doono askarta geysatay tacaddiyada
In ka badan 500 oo kiisas kufsi ah ayaa laga soo sheegay shan xarun caafimaad oo ku taalla gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, oo ka digtay in laga yaabo in tirada saxda ah ay aad uga badan tahay intaas sababo la xiriira inay dadku ka baqayaan takoor iyo iyadoo aysan jirin adeegyo caafimaad.
“Haweenku waxay sheegeen inay kufsadeen rag hubeysan, waxay sidoo kale ka warrameen sheekooyin kufsi ku saabsan, in lagu hor kufsaday xubnaha qoyskooda iyo ragga oo lagu qasbay inay kufsadaan xubno qoyskooda ka tirsan iyaga oo loo hanjabayo,” Wafaa Said, oo ah ku xigeenka xiriiriyaha gargaarka Qaramada Midoobay ee Itoobiya ayaa sidaas ka sheegtay hadal ay magaalada New York ugu jeedisay dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay.
Waxay sheegtay in ugu yaraan 516 kiisas kufsi ah laga soo sheegay shan xarun caafimaad oo ku kala yaalla Mekelle, Adigrat, Wukro, Shire iyo Axum.
“Iyadoo ay jirto in inta badan xarumaha caafimaadka aysan shaqeyneyn iyo takoorka la xiriira kufsiga, waxaa loo maleynayaa in tirada saxda ah ay intaas aad uga badan tahay,” ayay intaas ku dartay.
Tiro saraakiil sare oo Qaramada Midoobay ka tirsan ayaa Isniintii ku baaqay joojinta weerarrada lagu bartilmaameedsanayo rayidka ku sugan Tigray.
Dagaal ayaa ka qarxay Tigray bishii November kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo xisbigii hore ee gobolka xukumayay ee TPLF. Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dalka deriska la ah ee Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka.
Dowladda “si adag” ayay u qaadatay eedeymaha kufsiga waxayna gobolka geysay xubno xaqiiqo raadin ah, ayuu yiri safiirka Itoobiya u fadhiya Qaramada Midoobay, Taye Atskeselassie Amde.
“Itoobiya waxay leedahay siyaasad aan dulqaad u lahayn dembiyada galmo cid walba oo lagu helo inay mas’uul ka tahay ficilladaas xun waxaa loola xisaabtami doonaa sida sharciga uu qabo,” ayuu yiri.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Eritrea Osman Saleh Mohammed iyo Wasiirka Warfaafinta, Yemane Gebremeskel, ayaan ka jawaabin baaqyada iyo farriimaha ku aaddan inay ka hadlaan hadalkii shalay ee Qaramada Midoobay.
Qalalaasaha Tigray waxaa ku dhintay kumannaan qof, halka boqollaal kun oo kalena ay ku qasbeen inay ka qaxaan guryahooda ku yaalla gobolka buuralleyda ah ee ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof.
“Inta badan dadka gudaha ku barakacay ma qaadan wax aan ka ahayn dharkii ay xirnaayeen. Way naxsan yihiin waxayna ka sheekeynayaan safarkii adkaa ee ay badbaadada ku doonayeen. Qaarkood waxay sheegeen inay labo toddobaad soo lugeynayeen halka qaarkoodna ay soo lugeeyeen 500 km,” ayay tiri Wafaa.
“Dadka ay la soo safreen, qaarkood waxaa la sheegay in la dilay, gaar ahaan dhalinyaro, dadka waxaa la sheegay in la gaaracay, haweenka ayaa la kufsaday, qaarkood oo uur lahaa waddada ayay ku dhaleen iyaga oo ilmahoodana ay ka dhinteen,” ayay tiri.
Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay tacaddiyada, halka Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu ficilladaas ku tilmaamay isir sifeyn. Itoobiya ayaa diidday eedeymaha Blinken.
Toddobaadkan dhexdiisa, Abiy ayaa markii ugu horreysay qirtay in tacaddiyada sida kufsiga la geystay wuxuuna sheegay in askari walba oo dembiyo geystay la ciqaabi doono.
Dhowr goobjoogayaal ah oo Tigray ku sugan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada Eritrea ay si joogto ah u dilaan rayidka, ayna kufsadaan jirdilna u geystaan haweenka isla markaana ay dhac u geystaan guryaha iyo beeraha.
Eritrea kama aysan jawaabin weydiimaha wararka la xiriira tacaddiyada